မျိုးစောင့်ဥပဒေ ပြဌာန်းရေး ရဟန်းသံဃာနဲ့သက်ဆိုင်သလား??? ~ Nge Naing
မျိုးစောင့်ဥပဒေ ပြဌာန်းရေး ရဟန်းသံဃာနဲ့သက်ဆိုင်သလား???
Saturday, May 10, 2014 Nge Naing 23 comments
အမျိုးသားရေးဝါဒ နဲ့ ဗုဒ္ဓ၀ါဒဟာ ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့်ကျင်ပါတယ်။ ဥပမာ - ဂေါတမဗုဒ္ဓ နဲ့ ရှင်ဒေ၀ဒတ္တ တုို့ဟာ သာကီဝင်မင်းမျိုးမှ ဆင်းသက်လာသူများ ဖြစ်ကြပြီး ဝမ်းကွဲ ညီအကုိုလည်း တော်စပ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်က အဂ္ဂသာဝကနှစ်ပါးကုို ရွေးချယ်ရာမှာ ရှင်ဒေဝဒတ်ကုို မရွေးချယ်ဘဲ ဗြဟ္မဏအနွယ်မှ လာတဲ့ ရှင်သာရိပုတ္တရာ နဲ့ ရှင်မောဂ္ဂလာန် တုို့ကို သာ ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာ အမျိုးအနွယ်ကုို မကြည့်ပါဘူး။ သီလ သမာဓိ ပညာ ဆုိုတဲ့ အရည်အချင်းကုိုသာ ကြည့်ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တရားတော်မှာ အမျိုးမာန် အမျိုးစွဲ ထားဖို့ ဟောခဲ့တဲ့ တရား မပါဝင်ပါဘူး။ ရုပ်နာမ် ပရမတ်ကုို ထွင်းဖေါက်မြင်တော်မူတဲ့ ဘုရားရှင်အနေဖြင့် အဝိဇ္ဇာဖုံးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တဝါ ပညတ် အမြင် အပေါ် အခြေခံတဲ့ လူမျိုးစွဲ ဘာသာစွဲကုို ဟောရန် အကြောင်းမရှိပါဘူး။ အစွဲဆုိုတာ တဏှာလောဘပါ။ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ တရားတော်ဟာ တဏှာကင်းရာ ကုန်ရာကုို ကျင့်ဖုို့ ဟောတော် မူခဲ့တဲ့ တရားတော်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ တဏှာပွားကြောင်းကုို ဖြစ်စေမယ့် မည်သည့်အစွဲကုိုမျှ မြတ်စွာဘုရား အားပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြတ်စွာ ဘုရား က သူ့ရဲ့ သာကီဝင် မင်းမျိုးအတွက်ကုိုသာ ရည်ရွယ်ပြီး တရားဟောခဲ့တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ မြတ်စွာဘုရားက (၃၁) ဘုံမှာ ရှိကြတဲ့ သတ္တဝါအားလုံးအတွက် တရားဟောခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓရဲ့ ၀ါဒ က လူမျိုးတမျိုးတည်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆုိုတဲ့ ဘာသာတခုတည်းနဲ့သာ သက်ဆုိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဝါဒက သတ္တဝါအားလုံးနဲ့ သက်ဆုိုင်တဲ့ ဝါဒပါ။ အမျိုးသားရေးဝါဒကတော့ လူမျိုးတမျိုးနဲ့သာ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓ၀ါဒ နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒကုို မရောထွေး သင့်ပါဘူး။ အမျိုးသားရေးဝါဒ စွဲကုိုင်ခြင်းဟာ ဘုရားရှင်ရဲ့ အလုိုတော် ဟုတ်သလား မဟုတ်ဘူးလား ဆုိုတာကုို ခုဒ္ဒကနိကာယ်လာ ဝသလသုတ္တန်မှာ ထင်ရှားစွာ တွေ့မြင်နုိုင်ပါတယ်။ ဝသလသုတ္တန်ကုို မြတ်စွာဘုရားရှင် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်းမှာ သီတင်းသုံးနေတော်မူစဉ် မြို့ထဲသုို့ ဆွမ်းခံ ကြွလာတော်မူတဲ့ ဘုရားရှင်ကုို အမျိုးဇာတ်ကြောင့် မာန်မာန ထောင်လွှားနေတဲ့ အဂ္ဂိကဘာရဒွါဇ ဗြဟ္မဏရဲ့ ရဟန်းယုတ် ဦးပြည်းယုတ် သူယုတ်မာ စသည်ဖြင့် ရုိုင်းစုိုင်း ကြမ်းတမ်းစွာ ခေါ်ဝေါ် ပြောဆုိုမှုကုို အကြောင်းပြုပြီး ဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်။ သာဝတ္ထိပြည် တည်ရှိရာ အိန္ဒိယနုိုင်ငံဟာ ရှေးယခင်မှ စပြီး ယနေ့တုိုင်အောင် ဇာတ်ခွဲခြားမှုစနစ် အား ကောင်းပြီး အမျိုးသားရေးဝါဒ အလွန် ပြင်းထန်တဲ့ နုိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝသလသုတ္တန်မှ အောက်ပါ ဂါထာ နှစ်ဂါထာကုို ထုတ်နှုတ် ဖေါ်ပြလုိုပါတယ်။ ကောဓနော ဥပနာဘိ စ၊ ပါပမက္ခီ စ ယော နရော ဝိပန္နဒိဋ္ဌိ မာယာဝီ၊ တံ ဇညာ ဝသလော ဣတိ “အကြင်သူသည် အမျက် ထွက်လေ့ ရှိ၏၊ ရန်ငြိုးဖွဲ့တတ်၏၊ ယုတ်မာသည်ဖြစ်၍ သူ့ကျေးဇူးကို ချေဖျက် တတ်၏၊ အယူပျက်စီးသူ ဖြစ်၏၊ လှည့် ပတ် တတ်၏၊ ထိုသူကို သူယုတ်မာဟူ၍ သိရာ၏” န ဇစ္စာ ဝသလော ဟောတိ၊ န ဇစ္စာ ဟောတိ ဗြဟ္မဏော ကမ္မုနာ ဝသလော ဟောတိ၊ ကမ္မုနာ ဟောတိ ဗြဟ္မဏော “အမျိုးဇာတ်ကြောင့် သူယုတ်မာ မဖြစ်နိုင်၊ အမျိုးဇာတ်ကြောင့် ဗြာဟ္မဏ မဖြစ်နိုင်၊ မိမိပြုသော အမှုကြောင့်သာလျှင် သူယုတ်မာ ဖြစ်ရ၏၊ မိမိပြုသော အမှုကြောင့် သာလျှင် ဗြာဟ္မဏ ဖြစ်ရ၏” ဒေသနာအဆုံးမှာ အဂ္ဂိကဘာရဒွါဇဗြဟ္မဏဟာ မြတ်စွာဘုရားကုို လေးစားကြည်ညိတဲ့ ဥပါသကာ ဒါယကာတယောက် ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓအဆုံးအမကုို မှန်မှန်ကန်ကန် နားလည်သဘောပေါက်တဲ့ ဘုရားသားတော်ဆုိုပါက ပြင်းထန်တဲ့ လူမျိုး ဘာသာ အယူဝါဒကုို လက်ခံကျင့်သုံးရန် သင့် မသင့် လေးနက်စွာ ပြန်လည် ဆင်ခြင် စဉ်းစားသင့်ပါ တယ်။ ပြင်းထန်တဲ့ လူမျိုး ဘာသာ အယူဝါဒမှ တဖက်စွန်း အမျိုးသားရေးဝါဒကုို ဦးတည်သွားနုိုင်တဲ့ အန္တရာယ် ရှိပါတယ်။ အန္တရာယ်ရဲ့ ခါးသီးတဲ့ အရသာကုို မကြာလှသေးတဲ့ ကာလတွေမှာ အပြစ်မဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေ ခံစားခဲ့ရပြီးပါပြီ။ ပြင်းထန်တဲ့ လူမျိုး ဘာသာဝါဒဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ကောင်းကျိုး ဖြစ်စေသလား။ ဆုိုးကျိုး ဖြစ်စေ သလား ဆုိုတာ ကမ္ဘာ့သမုိုင်းမှာလည်း သက်သေ ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ ယခုလည်း ဆီးရီးယား အီရတ် နုိုက်ဂျီးရီးယား စတဲ့ နုိုင်ငံတွေမှာ အပြစ်မဲ့ သာမာန်ပြည်သူတွေဟာ ပြင်းထန် တဲ့ လူမျိုး ဘာသာ အယူဝါဒရဲ့ သားကောင်ဘဝကုို ကျရောက်နေကြရတဲ့ သတင်းတွေကုို နေ့စဉ်လုိုလုို တွေ့မြင်ကြားသိနေရပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ သန့်စင်မွန်မြတ်တဲ့ တရားတော်ကုို လူမျိုးစွဲ ဘာသာစွဲ ဆုိုတဲ့ တဏှာအစွဲနဲ့ အရောင် ဆုိုးတဲ့ လုပ်ရပ်မှန်သမျှဟာ မဖြစ်သင့်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေပါ။ မေတ္တာ ကရုဏာ မုဒိတာ ဥပေက္ခာ ဆုိုတဲ့ ဗြဟ္မဇုိုရ်တရားရဲ့ ပြယုဂ်ဖြစ်တဲ့ မွန်မြတ်သန့်စင်တဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားရာ နုိုင်ငံတနုိုင်ငံဖြစ်ပါလျှက်နဲ့ မငြိမ်းချမ်းနုိုင်တဲ့ နိုင်ငံ၊ ကမ္ဘာမှာ အဆင်းရဲဆုံး အမွဲတေဆုံး နုိုင်ငံ ဖြစ်နေရခြင်းရဲ့ အဓိက တရားခံဟာ အာဏာရှင်တုို့ရဲ့ အာဏာအပေါ် တပ်မက်စွဲလမ်းတဲ့ တဏှာဥပါဒါန် အစွဲကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာကုို မစွန့်နုိုင် ဖြစ်နေကြတဲ့ စစ်အာဏာရှင် မျိုးဆက် ဗုိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကုို အာဏာအပေါ် တပ်မက် မော တဲ့ တဏှာကုို စွန့်ဖုို့ ဟောပြော ပြသ ဆုိုဆုံးမခြင်းသည်သာလျှင် သာသနာ့ဝန်ထမ်း ရှင်ရဟန်းများရဲ့ တာဝန် ဖြစ်ပါတယ်။ ထုိုတာဝန်ကုို ထမ်းဆောင်ခြင်းဟာ လက်ရှိ မြန်မာ့နုိုင်ငံ အရေးအတွက် အလုိုအပ်ဆုံးနဲ့ အရေးအကြီးဆုံး လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာအမျိုးသမီးများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ပြဌာန်းဖုို့ ကြိုးစားနေကြတဲ့ မျိုးစောင့်ဥပဒေ ဆုိုတာ သူတုို့အတွက် လုို မလို၊ အဓိက ကျ မကျ ဆုိုတာ စနစ်တကျ လေ့လာသုံးသပ်ဖုို့ လုိုအပ်မယ် ထင်ပါတယ်။ ခေတ်ပညာတတ် ဘွဲ့ရတွေတောင် ပါဝင်တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်များဟာ ဘာ့ကြောင့် ဟောင်ကောင်ကုို သွားပြီး အိမ်ဖေါ်လုပ်နေကြရပါသလဲ။ မြန်မာအမျိုးသမီးငယ် အများစု ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အဓိက ပြဿနာက ဘာလဲ ဆုိုတာ အရိပ်အမြွက်မျှ သိချင် ရင် အထည်ချုပ်စက်ရုံ တရုံလောက်ကုိုပဲ သွားကြည့်လုိုက်ရင် အဖြေပေါ်မယ် ထင်ပါတယ်။ သူတုို့အတွက် မျိုးစောင့်ဥပဒေ လုို မလို ဆုိုတာ သူတုို့အနေနဲ့ စဉ်းစားဖုို့ အချိန်ရကြမယ် မထင်ပါဘူး။ မြန်မာနုိုင်ငံမှာ ပရိယတ်နဲ့ ပဋိပတ်အလုပ်ကုိုသာ အားထုတ်နေတော်မူကြတဲ့ ဆရာတော် သံဃာတော် များစွာ ရှိကြပါတယ်။ ထိုဆရာတော် သံဃာတော်များဟာ ရဟန်းသဃာများနဲ့ လားလားမျှ မသက်ဆုိုင်တဲ့ မျိုးစောင့်ဥပဒေ ဆုိုတာကုို မကြိုက်ပေမယ့် ရှုတ်ရှုတ်ရှက်ရှက် ကိစ္စတွေမှာ ဝင်မပါချင်ဘဲ ကင်းကင်းရှင်းရှင်း နေတော်မူ လုိုတာကြောင့် ဒီကိစ္စအပေါ်မှာ တခွန်းတပါဒမျှ မ်ိန့်ကြားမှု မပြုကြတာပါ။ မျိုးစောင့်ဥပဒေအတွက် သဲသဲမဲမဲ ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့ ရဟန်းသံဃာ တချို့ကုို မြင်ရတော့ နူရာဝဲစွဲ လဲရာ သူခုိုးထောင်း ဆုိုသလုို မငြိမ်းချမ်းနုိုင်တဲ့ နုိုင်ငံကုို ပုိုပြီး မငြိမ်းချမ်းအောင်၊ ဆင်းရဲတွင်း နက်ပြီးသား နုိုင်ငံကုို ဆင်းရဲတွင်း နက်သထက် နက်အောင် တွန်းပုို့နေသလုိုပါပဲ။ မျိုးစောင့်ဥပဒေဆုိုတာ ထုိုင်ခုံမြဲရေး ပဓာနတရား လက်ကုိုင်ထားကြတဲ့ စစ်အာဏာရှင် မျိုးဆက်အတွက် တော့ အကြိုက်တွေ့မယ့် ဥပဒေဖြစ်မှာ သေချာပါတယ်။ အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) - See more at: http://www.dawnmanhon.com/2014/05/blog-post_2880.html#sthash.CzhBbrN0.dpuf
ဒေါင်းမာန်ဟုန် < http://www.dawnmanhon.com/2014/05/blog-post_2880.html#sthash.CzhBbrN0.dpbs > မှ ပြန်လည်ကူးယူဖေါ်ပြထားပါတယ်။
မုဒိမ်းမှု အခြေခံ ဆူညံနေသော မြန်မာ အမြန်မကြာ ငြိမ်းချမ်းပါစေ (၁) says:
July 3, 2014 at 10:18 PM Reply
မုဒိမ်းမှု နဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ ကမ္ဘာ့နေရာတိုင်းမှာ ဖြစ်နေတာပါ၊ နိုင်ငံ၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ယဉ်ကျေးမှု နဲ့ မပတ်သက်ပါ
မုဒိမ်းမှု အခြေခံ ဆူညံနေသော မြန်မာ အမြန်မကြာ ငြိမ်းချမ်းပါစေ
"အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ"
ခုတလော ခေတ်စားလွန်းလှသော အထက်ပါစကားစုများကို ချရေးကြည့်မိခြင်းသာ။
အားမလိုအားမရ ဖြစ်ခြင်းများ တောင်ပုံ ယာပုံ ဖြစ်လာသောအခါ
Wikipedia လှန်လှောမွှေနှောက်ပြီး မလောက်လေး မလောက်စား အထောက်အထားများ ကို မချင့်မရဲ ဖတ်ဖြစ်မိ။
၂၀၁၂ မေလမှာ စတင်ခဲ့တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်က မသီတာထွေး မုဒိမ်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခံရတဲ့ အမှု မှသည် ..........
အခု ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ သစ်ထူးလွင် စာမျက်နှာမှာ ကွင်းစ ကွင်းပိတ်နဲ့ "လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ညီအစ်ကိုနှစ်ဦး (မွတ်ဆလင်ကုလား)"၊ "ဆိုင်က အလုပ်သမားမိန်းကလေး (ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်အမျိုးသမီး) " လို့ တမင်တကာ ကြံစည် ရေးသားတင်ပြလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ..........
ရလာတဲ့ အကျိုးဆက်များ ကတော့ ---
လူပေါင်းများစွာ အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့၊ အခြေမဲ့ အနေမဲ့၊
ဒုက္ခသည်စခန်းများ မှာ တချို့၊
အသက်လု ထွက်ပြေးရင်း လမ်းမှာ လှေမှောက်ရေနစ်အသက်ဆုံး ရှုံးသွားကြသူများ၊
မသမာသူတွေရဲ့ လှည့်ဖျားမှုကြောင့် လူကုန်ကူးခံ လူငယ်များ၊
မိတကွဲ ဖတကွဲ နဲ့ မိဘ ပါ မဲ့သွားကြတဲ့ ကလေးငယ်များ၊
နေရပ်စွန့်ခွာသွားကြရတဲ့ အရောင်းအဆင်းမဲ့ မျက်ဝန်းများနဲ့ လူပေါင်းများစွာ။
မုဒိမ်းမှု အခြေခံ ဆူညံနေသော မြန်မာ အမြန်မကြာ ငြိမ်းချမ်းပါစေ (၂) says:
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ တစ်နှစ်ကို မုဒိမ်းမှုပေါင်း ၂၃၇၈၆၈ (နှစ်သိန်းသုံးသောင်းကျော်) လောက် ဖြစ်ပွားလေ့ ရှိပြီး ၂ မိနစ်မှာ တစ်ယောက်နှုန်း မုဒိမ်းကျင့်ခံနေရပါတယ် တဲ့။
ဆွီဒင်နိုင်ငံကတော့ လက်ရှိ ဥရောပမှာ မုဒိမ်းမှု ဖြစ်ပွားခြင်း ရာခိုင်နှုန်း အမြင့်ဆုံးလို့ ဝီကီ ထဲက စာရင်းမှာ တွေ့ ရပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ကုသမဂ္ဂ ရဲ့ အမျိုးသမီး အကြမ်းဖက်ခြင်းဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ တစ်ခုအရ ကမ္ဘာပေါ်က ၇၀% သော အမျိုးသမီးတွေဟာ ဘ၀ မှာ အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ်လောက်တော့ အနိုင်ကျင့်တာ ခံဖူးကြပါတယ်တဲ့၊
အကြမ်းဖက်ခံရတဲ့ အများဆုံး အသက်အရွယ်တွေကတော့ အသက် ၁၅ နှစ် နဲ့ ၄၄ နှစ်ကြား အမျိုးသမီးတွေ ဖြစ်ပြီးတော့
မုဒိမ်းမှု နဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ နိုင်ငံ၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ယဉ်ကျေးမှု နဲ့ မပတ်သက်ပဲ ကမ္ဘာ့နေရာတိုင်းမှာ ဖြစ်နေတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ မှာတော့ နေ့စဉ် အမျိုးသမီး ၃ ယောက်စီ ဟာ သူတို့ ရဲ့ခင်ပွန်း သို့မဟုတ်၊ အမျိုးသားအဖေါ် သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းဟောင်း ဒါမှ မဟုတ် ဆွေမျိုးတော်စပ်သူတွေ့ ရဲ့ အလိုမတူပဲ အနိုင်ကျင့်တာ ခံရပြီးတော့ သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံနေရပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ မုဒိမ်းမှု ဖြစ်ပွားနှုန်း အမြင့်မားဆုံး နိုင်ငံ ၅ နိုင်ငံကတော့ လက်စ်ဆိုသို၊ ဆွီဒင်၊ စိန့်ဗင်းဆင့် ဂရင်နာဒိန်း၊ နယူးဇီလန်၊ ဘယ်လ်ဂျီယန် ဖြစ်ပါသတဲ့။
အလိုမတူပဲ သားမယား ပြုကျင့်ခြင်း (မုဒိမ်းမှု) ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို ၁၄ ရာစု ရောမခေတ်က ပဲ စတင် အသုံး ပြုခဲ့ပါတယ်။ ရောမခေတ်က ဂုဏ်သရေရှိအမျိုးသမီး Lucretia မုဒိမ်းကျင့်ခံရပြီး ကိုယ့်ကိုယ် သတ်သေသွားခြင်းဟာ ရောမ အင်ပါယာ ပြိုကွဲပြီး ရောမပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအဖြစ်ကိုရောက်စေခဲ့တယ်လို့ သမိုင်းမှတ်တမ်းများက ဆိုပါတယ်။
မုဒိမ်းမှု အခြေခံ ဆူညံနေသော မြန်မာ အမြန်မကြာ ငြိမ်းချမ်းပါစေ (၃) says:
ဝီကီထဲက ဖေါ်ပြထားတဲ့ အောက်က ဇယားအရ အမျိုးသားတွေ အတွက် မုဒိမ်းမှု ဖြစ်ရတာဟာ သူတို့ရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရပိုင်ခွင့်ကြောင့် လို့ ထင်နေကြတဲ့ ရာခိုင်နှုန်းက အများဆုံး ဖြစ်နေပါတယ်။ အရက်မူးလို့ ဖြစ်တယ်ဆိုတာက နည်းပါးပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့အချက်က အပြစ်ပေးတဲ့ အနေနဲ့ မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မုဒိမ်းမှု ကျူးလွန်ခဲ့သူ အမျိုးသားများ ပြောတဲ့ မုဒိမ်းမှု ကျူးလွန်ရခြင်း အကြောင်းရင်းပြ ဇယား
အရက်မူးလို့ မုဒိမ်းကျင့်တာ - ၂၇%
အပြစ်ပေးတဲ့ အနေနဲ့ မုဒိမ်းကျင့်တာ - ၃၇.၉%
ဖျော်ဖြေမှု လိုချင်လို့ မုဒိမ်းကျင့်တာ - ၅၈.၇%
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရပိုင်ခွင့်လို့ ထင်လို့ မုဒိမ်းကျင့်တာ - ၇၃.၃%
အောက်က ဇယားအရဆိုရင်တော့ သူတို့ မုဒိမ်းကျင့်ပါတယ်လို့ ၀န်ခံတာ ပါပူဝါနယူးဂီနီက အမျိုးသားတွေက အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကတော့ အနိမ့်ဆုံးလို့ တွေ့ရပါတယ်။
နိုင်ငံအလိုက် မုဒိမ်းမှု ကျူးလွန်ပါတယ်လို့ ၀န်ခံခဲ့သူ အမျိုးသားများ ရာခိုင်နှုန်းပြ ဇယား
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် - ၁၁.၁ %
ကမ်ဘောဒီးယား - ၂၀.၈%
တရုတ် - ၂၂.၇%
အင်ဒိုနီးရှား - ၃၁.၉%
ပါပူဝါနယူးဂီနီ - ၆၀.၇%
ပျမ်းမျှ - ၂၄.ဝ%
အသက်အရွယ်အားဖြင့် အသက် ၁၅ နှစ် နဲ့ ၁၉ နှစ်ကြား မိန်းကလေးတွေ က မုဒိမ်းကျင့်ခံရနှုန်း အများဆုံး ဖြစ်နေပြီး အသက်အရွယ်မရွေး မုဒိမ်းကျင့်ခံရနိုင်တဲ့အကြောင်း အောက်က ဇယားမှာ တွေ့ နိုင်ပါတယ်။
မုဒိမ်းမှု ကျူးလွန်ခံရသူ အမျိုးသမီးများ၏ အသက်အရွယ်အလိုက် ရာခိုင်နှုန်းပြဇယား
အသက် ၁၅ နှစ် အောက် မိန်းကလေးများ - ၁၄.၈%
အသက် ၁၅ နှစ် နှင့် ၁၉ နှစ်ကြား မိန်းကလေးများ - ၄၂.၇%
အသက် ၂၀ နှစ် နှင့် ၂၉ နှစ်ကြား အမျိုးသမီးများ - ၃၂.၅%
အသက် ၃၀ နှစ် နှင့် ၃၉ နှစ်ကြား အမျိုးသမီးများ - ၄.၄%
အသက် ၄၀ နှစ် နှင့် အထက် အမျိုးသမီးများ - ၂.၉%
မုဒိမ်းမှုတွေ ရဲ့ ၆ % လောက် မှာ ယောင်္ကျားလေးတွေဟာ အလိုမတူပဲ ဆက်ဆံခံရတာပါတဲ့။
မုဒိမ်းမှု အခြေခံ ဆူညံနေသော မြန်မာ အမြန်မကြာ ငြိမ်းချမ်းပါစေ (၄) says:
July 3, 2014 at 10:27 PM Reply
မုဒိမ်းမှု အခြေခံ ဆူညံနေသော မြန်မာ အမြန်မကြာ ငြိမ်းချမ်းပါစေ။
ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေး ဟာ သူတို့ရဲ့ နောက်ဆုံးပစ်မှတ်" လို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ထဲက အွန်လိုင်းကောလဟာလတွေ မှန်လာတဲ့ထိ ရူးသွပ်သူတွေ အမြန်ဆုံး အမြင်မှန်ရကြပါစေ။
စံနစ်တကျ စီစဉ်တယ်လို့ သေချာတယ် ဆိုရင်လဲ စီစဉ်သူတွေ အမြန်ဆုံး အပြစ်ပေးခံရပါစေ။
အားလုံးကို ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ -
၀၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၄
Credit - မမသီရိ
သစ်ထူးလွင်က စတဲ့ မန္တလေးမီး (၁) says:
July 3, 2014 at 10:31 PM Reply
﻿ငြိမ်းချမ်းပါစေ မန္တလာမြေ ....
﻿သစ်ထူးလွင်က စတဲ့ မန္တလေးမီး...
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့
တကယ်ဆို ပြသနာ တကယ်မဖြစ်စေချင်ရင် ရန်ကုန် ၄၈ လမ်း ဗလီကိစ္စတုန်းက ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမထဲမှာ တစ်နေ့တည်း သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ နှစ်ကြိမ်လုပ်ပြီး ပြသနာကို ပိတ်ပစ်သလို ခုလည်း မန္တလေးအာဏာပိုင်တွေက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ပြီး ဘာမှ ဆက်မဖြစ်အောင် လုပ်ပစ်လို့ ရနိုင်တယ်။ ...
၁။ မနေ့က သစ်ထူးလွင်က စဖွတယ်။ ဒီညီအကို နှစ်ယောက် မုဒိမ်းကျင့်ရင် ဒီညီအကိုနှစ်ယောက်ကို ဖမ်းပေါ့။ ရဲက အရေးယူတာ မတွေ့ရဘူး။ ဒီညီအကို မန္တလေးဗလီမှာ ၀တ်ပြုနေတာကို တွေ့တဲ့လူ အများကြီးပဲလို့ သိနေရပြန်တယ်။ ရာဇ၀တ်မှုဖြစ်တဲ့အတွက် ရဲက ဖမ်းဆီးအရေးမယူသေး ဆိုကတည်းက လွဲနေပြီ။
၂။ အာဏာပိုင်တွေ ကိုယ်တိုင်က ဟုတ်ရင် ဟုတ်တယ်။ မဟုတ်ရင် မဟုတ်ဘူး ရှင်းသင့်တယ်။ ခုတော့ တမင် ပြသနာကို မကြီးထွား ကြီးထွားအောင် စောင့်နေစေချင်တဲ့ သဘောကို တွေ့နေရတယ်။
၃။ တစ်ရက် ရှိနေပြီ။ မဖမ်းဘူး၊ လွှတ်ထားတယ်။ မဟုတ်ဘူးဆိုလည်း ရှင်းပေးလိုက်။ ဒီလိုလည်း မဟုတ်သလို၊ ဟိုလိုလည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး။ အနီးကပ်နေကြတဲ့ မန္တလေးသားတွေဆီက သိရတာက သစ်ထူးလွင်က တမင် ဖွတာတဲ့....။ ဒါဆို ဘာကြောင့် ဖွရသလဲ။ နောက်ကွယ်က ရည်ရွယ်ချက်ကို မြင်အောင် ကြည့်တတ်သင့်တယ်။ သစ်ထူးလွင်သတင်း နောက်က ကော်ပီလုပ်ပြီး ဆက်ဖွတဲ့ လူတွေကလည်း မဟုတ်မှန်း သိရင် ပို့စ်ကို ဖျက်ပစ်သင့်တယ်။ ပါးစပ်က ပန်းစကားအော်နေပြီး လက်တွေ့ ပြသနာကို ဖိတ်ခေါ်ဆွဲသွင်းသလို လုပ်နေရင် မီးစတစ်ဖက် ရေမှုတ်တစ်ဖက် လုပ်နေတာပဲ။ တကယ်ဆို ကိုယ်ပိုင် အသိတရား နည်းနည်းလောက် ရှိရင် ဒီလို ပို့စ်မျိုးကို ကော်ပီလုပ်ပြီး လုံးဝ မဖြန့်သင့်ဘူး။ အင်မတန် ထိလွယ် ရှလွယ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကို ချိန်သားကိုက် ဓာတ်ဆီလောင်းပေးနေတာနဲ့ တူနေတဲ့အတွက်ပဲ။ ၂၀၁၂ ရခိုင်သီတာထွေးကိစ္စ နောက်ဆက်တွဲ တောင်ကုတ် လူသတ်ပွဲမှာ တောင်တွင်းကြီးသားမွတ်ဆလင်တွေကို အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းသား မွတ်ဆလင်ကုလားတွေလို့ အစိုးရသတင်းးစာတွေ ကိုယ်တိုင် ချိန်သားကိုက်ဓာတ်ဆီလောင်းပေးခဲ့တာ မြင်ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီသတင်းတစ်ပုဒ်က စလိုက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းကြောင့် အသက်တွေ အိုးအိမ်တွေ ဘယ်လောက်တောင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသလဲ သိလိုက် မြင်လိုက်ကြမှာပါ။ ဒါတွေကို သိပါလျှက် ဒီလို ထိခိုက်တတ်မှန်း သိပါလျှက် ထပ်ပြီး ကော်ပီလုပ် ဖြန့်ဝေတဲ့ လူတွေဟာ အတော်ကြီး မိုက်မဲ အသိဥာဏ်နည်းပါးလွန်းတယ်လို့ပဲ မြင်မိတယ်။ ဒီလို ဖြစ်လာရင် ဘယ်သူတွေ ဆုံးရှုံးမလဲ။ ၂၀၁၅ မတိုင်မီ ဖြစ်စရာ အကုန်ဖြစ်လေလေ ခင်ဗျားတို့ နှစ် ၂၀ လောက် ကြိုးစားထားတဲ့ အရာတစ်ခုဟာ တစ်ရက် နှစ်ရက်နဲ့ အကုန်ပျောက်သွားတော့မှာပါ။ ဒီလို ပြသနာ မဖြစ်ဖြစ်အောင် မီးထွန်းရှာဖို့ ကလည်း ဘယ်သူတွေ လုပ်နေသလဲ မမြင်တတ်ရင် သေကြရုံပါပဲ။
၄။ မနေ့က ရှင်းသင့်တဲ့ ပြသနာကို မနေ့က မရှင်းတဲ့အတွက် ဒီနေ့ ပွဲဆက်လာတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ လူစုလူဝေးတွေ ဖြစ်လာရတယ်။ လူစုခွဲနေရပြီ။ ရဲက ရဲအလုပ် လုပ်ခဲ့ရင် ဒီနေ့ ဒီပြသနာ ပေါ်စရာ မရှိဘူး။ ရာဇ၀တ်ဆိုရင် ဖမ်း။ မဟုတ်ရင် စဖွတဲ့ သစ်ထူးလွင်ကို အရေးယူ။ ပြီးပြီ။ လူစုစရာကိစ္စ မဟုတ်ဘူး။ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး။ မြင်းအလုပ် မြင်းလုပ်ရင် ခွေးဝင်ရှုပ်စရာ မရှိပါဘူး။
သစ်ထူးလွင်က စတဲ့ မန္တလေးမီး (၂) says:
၅။ ဒီသတင်း မဟုတ်မမှန်ခဲ့ရင်ကော.... ဒီနေရာမှာအဖြေတစ်ခု ထုတ်ပေးရတော့မှာပါ။ ရောချလို့ မရတော့ပါဘူး။ NLD လို နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့လည်း လက်ရှောင်မနေသင့်ဘူး။ မဟုတ်မှန်း သိရင် သစ်ထူးလွင်ကို အမြစ်ကနေလှန်ပစ်လို့ ရတဲ့အထိ တွန်းတိုက်ပစ်သင့်တယ်။ ဒီလောက်လုပ်စရာ လိုသလား။ ၁၀၀ % လိုအပ်တာပေါ့။ အမှိုက်က စတဲ့မီးပဲ။ ဒီမီးကို မဟုတ်မှန်း သိပါလျှက် စရှို့တဲ့ကိစ္စဟာ ပေါ့သေးသေး မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ် ကျယ်ပြန့်လာရင် NLD လည်း မြောင်းထဲရောက်မယ့် လမ်းစတစ်ခုပဲ။ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ပဲ အဓိကရုဏ်းအကြီးအကျယ်ထပ်ဖြစ်ခွင့် ပေးလိုက်ပါ။ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး သွားပါပြီ။ လူတိုင်း မြင်တတ်ပါတယ်။ ရှောင်သင့်တဲ့ ကိစ္စကို တမင် မီးထိုးပြတာ ကောင်းမွန်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက် မဟုတ်မှန်း ထမင်းစားသူတိုင်း သိကြမှာပါ။
၆။ ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ ပြသနာကို ဖန်တီးပြပြီးတဲ့နောက် ဒီညီအကို နှစ်ယောက်ကို ဘာလုပ်ပြတော့မလဲ။ ဒီညီအကို နှစ်ယောက်ဟာ တကယ်ဟုတ်ခဲ့ရင် ပြသနာ မရှိပါဘူး။ သူ့လမ်း သူရွေးတာပါပဲ။ တကယ်မုဒိမ်းမှု မကျူးလွန်ဘဲ စွပ်စွဲခံခဲ့ရတာဆိုရင် သူတို့ဘ၀မှာ ပြန်ဖာထေးလို့ မရလောက်အောင် ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုသာ ခံစားရကြေးဆိုရင် သစ်ထူးလွင် ဘလော့ပိုင်ရှင်ကို ထိုက်သင့်တဲ့ တုန့်ပြန်မှုတစ်ခုတော့ နောက်နောင်ဒီလို မလုပ်ရဲအောင် ပြန်ပေးသင့်ပါတယ်။
ဒါတွေအားလုံးဟာ အတွေးတွေပဲ ဖြစ်နေပါသေးတယ်။ လက်တွေ့မြင်မိတာကတော့ ဒီနေ့ည မန္တလေး ဘာမှ မဖြစ်ဖို့ပါပဲ။
မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားအားလုံး လှည့်ကွက် အသွယ်သွယ်မှ လွတ်ကင်းကြပါစေ။
၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၄
လူမျိုးရေးနှင့် ဘာသာရေး ပဋိပက္ခများကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် ပြည်သူအားလုံး သတိရှိကြပါ says:
July 3, 2014 at 10:49 PM Reply
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂ ရက်
လူမျိုးရေးနှင့် ဘာသာရေး ပဋိပက္ခများကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် -
- ပြောတာ ကြားတိုင်း၊ မြင်တာ ဖတ်ရတိုင်း ချက်ချင်း အလွယ်တကူ မယုံကြည်ပါနှင့်။
- မိမိ မျက်စိဖြင့် တပ်အပ်မမြင်နိုင်သည့်အပေါ်ကောက်ချက်ချ ဝေဖန်သုံးသပ်မှုမျိုး မပြုလုပ်ပါနှင့်။...
- မိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မသိနိုင် မမြင်နိုင်သည့် သတင်းများအပေါ် ခိုင်လုံမှု မရှိဘဲ မိမိမှတစ်ဆင့် ထပ်မံ မဖြန့် ချီပါနှင့်။
ပဋိပက္ခဘေးရန် ကာကွယ်ရန် -
- မိမိ၏ ဒေါသစိတ်အား အရင်ဆုံး မိမိဖာသာ ဦးစွာ ထိန်းသိမ်းပါ။
- မိမိနှင့် နီးစပ်သူအား မိမိကိုယ်တိုင်က အားပေးအားမြောက် မပြုလုပ်ဘဲ၊ စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်ရန်နှင့် အချိန်ယူ စုံစမ်းနိုင်ရန် ဖြောင်းဖြပါ။
- ပဋိပက္ခပိုမို ကြီးထွားစေရန် နှစ်ဘက်အစုတွင် ပါဝင် ပြောဆိုနေကြသူ ဖန်တီးနေကြသူများကို မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်သည်ကို လေ့လာဆန်းစစ်ပါ၊ အထောက်အထားနှင့်တစ်ကွ မှတ်တမ်းရယူထားပါ။
- မည်သည့် အကြမ်းဘက်မှု မဆို၊ မည်သည့် အကြမ်းဘက်သမားမဆို တရားဥပဒေအရ အရေးယူနိုင်စေရန်ကိုသာ ဦးတည်ပါ။
မိမိကိုယ်ကို အကြမ်းဘက်သမားအဖြစ် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ ဖြစ်စေ မဖြစ်မိစေရန် သတိထားပါ။
လူမျိုးရေးနှင့် ဘာသာရေး ပဋိပက္ခများကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် ပြည်သူအားလုံး သတိရှိကြပါ
ရှိခိုးတဲ့ဘုရား မတူတာနဲ့ ထသတ်ကြဖို့ မလိုပါ says:
July 4, 2014 at 5:15 AM Reply
ရှိခိုးတဲ့ဘုရား မတူတာနဲ့ ထသတ်ကြဖို့ မလိုပါ
'မြန်မာဘာသာဝင်' ဆိုတာ မရှိဘူး။
… … စတာတွေပဲ ရှိတယ်။
ရှိခိုးတဲ့ဘုရား မတူတာနဲ့ ထသတ်ကြဖို့ မလို
မင်းရော ငါပါ မြန်မာနိုင်ငံသား
တို့အားလုံး အတူတူပဲ ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုး
အကြမ်းဖက်မှု တွေထဲမှာ အဆင့်အမြင့်ဆုံးကတော့ "အစိုးရက ကြိုးကိုင်တဲ့ အကြမ်းဖက်မှု" တွေပဲ says:
July 4, 2014 at 5:35 AM Reply
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃ ရက်
"မန္တလေးမှာ ဆိုင်ကယ် ဖမ်းရင်တောင် အချုပ်ကားတွေ၊ ယာဉ်ထိန်းရဲတွေ အင်အား
မှာ မွတ်စလင်တွေကို အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်တဲ့ ပြဿနာက ၄၈ နာရီ ရှိလာပြီ။ တရားခံ တဦးတယောက်ကိုမှ
ဖမ်းဆီးတာ မတွေ့ရသေးဘူး" ဟု ဧရာဝတီသတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
အကြမ်းဖက်မှု တွေထဲမှာ အဆင့်အမြင့်ဆုံးကတော့ "အစိုးရက ကြိုးကိုင်တဲ့ အကြမ်းဖက်မှု" (State Sponsored Terrorism) တွေပဲ။
အစိုးရကိုယ်တိုင် မသိကျိုးကျွံပြုပြီး ထောက်ခံထားတာမို့ သာမန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေက အမိန့် တစုံတရာမရပဲ မထိရဲ၊ မတို့ရဲ၊ ကိုင်တွယ်ခွင့် မရှိဘူး။
အစောက မန္တလေးက ညီလေးတစ်ယောက်က မက်ဆေ့ထဲကနေ ရင်ဖွင့်လာတယ်။ “စိတ်တိုလွန်းလို့ ဒီအကြမ်းဖက်နေတဲ့လူတွေကို ကားနဲ့ လိုက်တိုက်ချင်တယ်ဗျာ” တဲ့။
“မလုပ်ပါနဲ့ဟ၊ ရဲက ဟိုလူတွေကို မဖမ်းရဲပေမဲ့ မင်းကို အကြမ်းဖက်သမား ဆိုပြီး ဖမ်းနေဦးမယ်” လို့ ပြန်ပြောလိုက်ရတယ်။
“ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ပြည်သူ့ဘ၀လုံခြုံရေးစီမံချက်” ဆိုတာ မေတ္တာသုတ် ရွတ်တဲ့ ဘုန်းဘုန်းတွေကို ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီးဖို့အတွက်ပဲ ဖြစ်မယ် says:
July 4, 2014 at 7:23 AM Reply
“ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ပြည်သူ့ဘ၀လုံခြုံရေးစီမံချက်” ဆိုတာ ရှိတယ်။ ဆူပူမှုတွေ ဖြစ်လာရင် ဘယ်လိုလုပ်မယ် ဆိုတာပေါ့။
အဲဒီ “ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ပြည်သူ့ဘ၀လုံခြုံရေးစီမံချက်” ထဲမှာ "အစိုးရက ကျောထောက်နောက်ခံ ပေးထားတဲ့ အကြမ်းဖက်သမားတွေ (State Sponsored Terrorists) ကို ဖမ်းဆီး အရေးယူဖို့အတွက် မပါဘူး ထင်တယ်။
“ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ပြည်သူ့ဘ၀လုံခြုံရေးစီမံချက်” ဆိုတာ မေတ္တာသုတ် ရွတ်တဲ့ ဘုန်းဘုန်းတွေကို ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီးဖို့အတွက်ပဲ ဖြစ်မယ်။
“ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ပြည်သူ့ဘ၀လုံခြုံရေးစီမံချက်” ဆိုတာ မေတ္တာသုတ် ရွတ်တဲ့ ဘုန်းဘုန်းတွေကို ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီးဖို့အတွက်ပဲ ဖြစ်မယ်
လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး သွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့ နေမျိုးဝေ နဲ့ ဦးဝီရသူ တို့ကို အစိုးရက ဘာလို့ မဖမ်းတာလဲ says:
July 4, 2014 at 8:05 AM Reply
မရိုးသားမှုတွေ ပြည့်နှက်နေတဲ့ မန္တလေး မွတ်ဆလင် ဗမာ အဓိကရုဏ်း
လူတွေ က ဦးဆန်းဆင့်ကို စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်။ ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့ ရုံးထုတ်မယ် ဆို တော့ မီဒီယာသမားတွေအပါအဝင် လူတွေကို သူတဦးတည်းဆီ အာရုံမကျစေချင် ခဲ့ဘူး။
ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး ဟောပြောပွဲတွေကလည်း အောင်မြင်မှု အရှိန်တွေ ရနေ တယ်။
ပထမ မုဒိန်းမှုကို မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်ဖို့ ဒုတိယ မုဒိန်းမှု သတင်း ဖွတယ်။
မန္တလေး မြို့ခံတွေက သတိရှိတော့ " ဒေါသဖြစ်နေတယ်" ဆိုတဲ့ မျက်နှာစိမ်း လူအုပ်ကြီး ထင်တိုင်း ကြဲခွင့် ဟာ ထင်း ကနဲ ဖြစ်နေတယ်။
စတေးခံ သားကောင်တွေကို အသေသတ်ဖို့ အမြဲ ရှာနေကြရင်း ဗုဒ္ဓဘာသာ တဦး၊ မွတ်စလင် တဦး ဟာ စတေးသွားလိုက်ကြရတယ်။
ဦးဝီရသူက "ဒုတိယမုဒိန်းမှုကြောင့် မန္တလေး အဓိကရုဏ်းဖြစ်တယ်" ကြေညာချက် ထုတ်တယ်။
လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး သွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့
တို့ကို အစိုးရက ဘာလို့ ဖမ်းဆီးတာမျိုး မလုပ်တာလဲ။
လူတိုင်း သိနေပြီး အစိုးရက မသိဘူး ဆိုတာ သဘာဝ မကျဘူး။
အခုနောက်ဆုံး ပဋိပက္ခကြောင့် ညမထွက်ရ အမိန့်ထုတ်ရတယ်ဆိုပြီး လုပ်လိုက်ပြီ။
မရိုးသားမှုတွေ ပြည့်နှက်နေတဲ့ မန္တလေး မွတ်ဆလင် ဗမာ အဓိကရုဏ်းဖြစ်စဉ်ကြီးပါ။
လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး သွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့ နေမျိုးဝေ နဲ့ ဦးဝီရသူ တို့ကို အစိုးရက ဘာလို့ မဖမ်းတာလဲ
အကြမ်းဖက်သမားတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ ဒေါသကို ဆွဖို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ကိုထွန်းထွန်း ကို စတေးပြီး မွတ်စလင်တွေရဲ့ ဒေါသကို ဆွဖို့ မွတ်စလင် ကိုစိုး (မြန်မာညွန့် စက်ဘီးဆိုင်) ကို စတေးလိုက်ပါပြီ says:
July 4, 2014 at 8:30 AM Reply
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ကိုထွန်းထွန်းကို ဆိုင်ကယ်စီးလာစဉ်မှာ တုတ်၊ ဓား လက်နက် အပြည့် ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ လူအုပ်စုတစုက တားပြီး ဓားနဲ့ ခုတ်လိုက်တယ်လို့ မန္တလေးက မျက်မြင်တချို့ ပြောလာကြပြီ။
ဒါဆို ကိုထွန်းထွန်းဟာ စတေးခံ ဒေါသအိုးကို ထိုးခွဲဖို့ မီးစ အလုပ်ခံလိုက်ရတာ ဆိုတာ ပေါ်လာပြီပေါ့။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက် အသတ်ခံရပြီလို့ ကြွေးကြော်ဖို့ ကိုထွန်းထွန်းဟာ စတေးခံ လူသား ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်။
မျက်မြင်တချို့ပြောတာက "ဆေးမှင်ကြောင်ရုပ်တွေ ထိုးထားတဲ့
ဟာ ထောင်ထွက်တွေ ဖြစ်နိုင်ပြီး တကယ့်ကို မျက်နှာစိမ်းတွေ ဖြစ်နေတာပါ" တဲ့။
"တခါ မွတ်စလင်တယောက် (ကိုစိုး (မြန်မာညွန့် စက်ဘီးဆိုင်)) လည်း သေဆုံးခဲ့ရတယ်။ မွတ်စလင် ကိုစိုး လည်း မွတ်စလင်တွေ
ဒေါသအိုး ပေါက်ကွဲစေဖို့ မီးစမွှေးပေးဖို့ စတေးခံ တဦးပဲ နေမှာပါ" လို့ မန္တလေးက လူတွေ ပြောပြကြတယ်။
Credit - Tun Wai@Facebook
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ ဒေါသကို ဆွဖို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ကိုထွန်းထွန်း ကို စတေးပြီး မွတ်စလင်တွေရဲ့ ဒေါသကို ဆွဖို့ မွတ်စလင် ကိုစိုး (မြန်မာညွန့် စက်ဘီးဆိုင်) ကို စတေးလိုက်ပါပြီ
အရပ်သားအယောင်ဆောင် စစ်အုပ်စုက အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကို စိတ်အားထက်သန်နေကြတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အာရုံကို မန္တလေး မွတ်စလင်မ့်-ဗမာ အဓိကရုဏ်းဘက်ကို အာရုံပြောင်းပြီ says:
July 4, 2014 at 9:13 AM Reply
မန္တလေးမှာ ဆူပူမှု အကြမ်းဖက်မှု မွတ်စလင်မ့်-ဗမာ အဓိကရုဏ်း ဖြစ်အောင် ဓာတ်ဆီလောင်းနေကြသူများ -
အရပ်သားအယောင်ဆောင် စစ်အုပ်စုက နောက်ကွယ်က ပံ့ပိုးပေးထားတဲ့ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ အသံကောင်း ဟစ်ပြီး အကြမ်းဖက် လုယက်သတ်ဖြတ်မယ့် အကြမ်ဖက်အဖွဲ့က မန္တလေးတစ်မြို့လုံးရဲ့ မွတ်စလင်မ့် များတဲ့ နေရာတွေကို ထိပ်တိုက်မဝင်ပါ
အဲဒီ အကြမ်းဖက် လုယက်သတ်ဖြတ်မယ့် အကြမ်ဖက်အဖွဲ့က မွတ်စလင်မ့်တွေ ဒေါသထွက်ပြီး ရာဇဝတ်မှုတွေ ကျူးလွန်လာအောင် တမင် လိုက်ဆွပေးနေကြတယ် မွတ်စလင်မ့်တွေ မှားအောင် လုပ်နေကြတယ်
အဲဒီ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ အသံကောင်း ဟစ်ပြီး လုယက်သတ်ဖြတ်မယ့် အကြမ်းဖက်အုပ်စုက မွတ်စလင်မ့် နည်းနည်းပဲရှိတဲ့ နေရာတွေကိုပဲ ဝင်တယ်
အဲဒီ မွတ်စလင်မ့် နည်းတဲ့ နေရာတွေက မွတ်စလင်မ့် အိမ်တွေ ဆိုင်တွေ ကားတွေ ဆိုင်ကယ်တွေကို ခဲနဲ့ပေါက် အကြမ်းဖက် ဖျက်ဆီးပါတယ်
ဆိုင်ကယ်စီး အကြမ်းဖက်သမားအဖွဲ့တိုင်းရဲ့ နောက်မှာ ရဲ အစောင့်အရှောက်ကား (အကြမ်းဖက်သမားများကို ကာကွယ်ပေးရေးတပ်ဖွဲ့ ကား) တစီးစီ ပါပါတယ်
၂၀၁၂ ရခိုင်အကြမ်းဖက် ပုံစံပါ
ဒီနေ့(၃-၇-၁၄) မနက်မှာ ၂၉လမ်း-၈၃လမ်းထောင့်မှာ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ အသံကောင်းဟစ် အကြမ်းဖက်အုပ်စုရဲ့ အကြမ်းဖက် ရိုက်နှက်ခံရတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ကိုစိုး (မြန်မာညွန့်) အရိုက်ခံရတဲ့ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ကွယ်လွန်သွားပါပြီ
မြန်မာညွန့် စက်ဘီးဆိုင်က အင်မတန် စိတ်ရင်းကောင်းပြီးစိတ်နေ သဘောထားသိမ်မွေ့တဲ့ စိုးစိုး ခေါ် ကိုစိုး အိုးဘိုဗလီကို အလာမှာ မျိုးသိန်း အီလက်ထရောနစ် ဖက်ခြမ်းမှာ အကြမ်းဖက်အုပ်စုရဲ့ ဝိုင်းရိုက်သတ်တာခံခဲ့ရတာပါ
အမျိုး ဘာသာ သာသနာ အသံကောင်းဟစ် အကြမ်းဖက်အုပ်စုရဲ့ ဝိုင်းရိုက်သတ်တာ ခံခဲ့ရသူ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် စိုးစိုး ခေါ် ကိုစိုး (မြန်မာညွန့်) - လမ်းဘေးမှာ ဒဏ်ရာတွေနဲ့လဲကျနေပုံ ဓါတ်ပုံ ကို
ဒီမှာ နှိပ်ပြီး ကြည့်နိုင်ပါတယ်
မန္တလေး အခြေအနေကတော့ တော်တော် တင်းမာတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိပါတယ်
ပြဿနာ ကြီးထွားဖို့အတွက် မမှန်သတင်းတွေနဲ့ ဝီရသူ ကိုယ်တိုင် ဖွနေပါတယ်
Credit - ဖူ့တာမိက်ဆီပုံး
ခင်ဗျားတို့ ပါးစပ်က ဆိုနေတဲ့ "နိုင်ငံတော်သီချင်း" ဆိုတာ ... "မိစ္ဆာတွေရဲ့ သွေးဆာနေတဲ့ အသံတွေ" ပဲ says:
July 4, 2014 at 9:27 AM Reply
ခင်ဗျားတို့ ပါးစပ်က ဆိုနေတဲ့ "နိုင်ငံတော်သီချင်း" ဆိုတာ ... "မိစ္ဆာတွေရဲ့ သွေးဆာနေတဲ့ အသံတွေ" ပဲ
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့
လူတဖက်သား အသက်ကို သေတဲ့အထိ တိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ်ရအောင် ...
.... လူရိုင်းတွေလား .... ။
.... မိစ္ဆာတွေလား .... ။
ခပ်ရှင်းရှင်းပဲ ပြောမယ် ...
ဒီလို အကျင့်မျိုးနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို လာ မပတ်သက်ကြနဲ့။
ခင်ဗျားတို့ ပါးစပ်က ဆိုနေတဲ့ "နိုင်ငံတော်သီချင်း" ဆိုတာ ...
"မိစ္ဆာတွေရဲ့ သွေးဆာနေတဲ့ အသံတွေ"။
ခင်ဗျားတို့ လက်ထဲက လွှင့်နေတဲ့ "သာသနာ့အလံ" ဆိုတာ ...
ဘယ်သူက မြှောက်ပေးလို့ လုပ်လုပ် ....
ဘယ်လောက် ရလို့ လုပ်လုပ် ....
ဘယ်လို အကြောင်းပြချက်နဲ့ လုပ်လုပ် ....
ခင်ဗျားတို့ဟာ ... ယဉ်ကျေးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ငြိမ်ချမ်းတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ မထိုက်တန်တဲ့
..... ပြည်ဖျက်၊ ဘာသာဖျက် .... လူရိုင်း မိစ္ဆာတွေသာ ဖြစ်တယ်။
ခင်ဗျားတို့ လုပ်ရပ်ရဲ့ သတင်းကို နားထောင်ရတာတောင် အော်ဂလီဆန်ပြီး ရွံစရာ သိပ်ကောင်းတယ်။
သွေးဆာနေတဲ့ မိစ္ဆာတွေဟာ ညအချိန်ဆို မန္တလေးမြို့ထဲ တစ္ဆေငြီးသံတွေနဲ့ "နိုင်ငံတော်သီချင်း" ကို သံပြိုင်ဆိုပြီး သွေးညှီနံ့ လွှမ်းနေတဲ့ "သာသနာ့အလံတွေ" လွှင့်လို့ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ လူသတ်ဖို့ ထွက်လာနေကြတယ် says:
July 4, 2014 at 9:38 AM Reply
သွေးဆာနေတဲ့ မိစ္ဆာတွေဟာ ညအချိန်ဆို မန္တလေးမြို့ထဲ တစ္ဆေတွေရဲ့ အော်ငြီးသံလို ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ အသံတွေနဲ့ "နိုင်ငံတော်သီချင်း" ကို သံပြိုင်ဆိုပြီး .... သွေးညှီနံ့ လွှမ်းနေတဲ့ "သာသနာ့အလံတွေ" ကို တလူလူလွှင့်လို့ .... ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ လူသတ်ဖို့ ထွက်လာနေကြတယ်။
မန္တလေးမြို့ဟာ ... ကျိန်စာမိနေသလို မိစ္ဆာတွေ ပျော်မြူးရာ ဖြစ်လာနေတယ်။
နေဝင်ချိန် ရောက်ရင် .... မကောင်းဆိုးဝါးတွေ အလျှိုလျှို ထွက်လာသလို ဝပ်ကျင်းထဲကနေ ... သွေးဆာနေတဲ့ အသံတွေ ပြုပြီး လူသတ်ကောင်တွေ ထွက်လာနေတာမို့ ... မန္တလေးသူ/ သားတွေဟာ ... ထိတ်လန့်နေကြရတယ်။
သွေးဆာနေတဲ့ မိစ္ဆာတွေဟာ ညအချိန်ဆို မန္တလေးမြို့ထဲ တစ္ဆေငြီးသံတွေနဲ့ "နိုင်ငံတော်သီချင်း" ကို သံပြိုင်ဆိုပြီး သွေးညှီနံ့ လွှမ်းနေတဲ့ "သာသနာ့အလံတွေ" လွှင့်လို့ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ လူသတ်ဖို့ ထွက်လာနေကြတယ်
မုဒိမ်းမှု အပါအဝင် မည်သည့် ရာဇဝတ်မှုမျိုးကိုမှ "ဒေါသထွက်နေသော လူအုပ်ကြီး" က ကိုယ့်ဘာသာ တရားစီရင်ခွင့် မရှိပါ says:
July 4, 2014 at 9:53 AM Reply
"ဒေါသထွက်နေသော လူအုပ်ကြီး" အမည်ခံ အကြမ်းဖက်သမား လူသတ်သမားများသို့ ...
ခင်ဗျားတို့က တရားသူကြီးတွေလား ... ။
ဘာမှန်း မသိတဲ့ ..... မသေချာတဲ့ အမှုတွေအတွက် .... ကိုယ့်ဘာသာ တရားစီရင်ခွင့် ... ခင်ဗျားတို့မှာ ရှိတယ်များ ထင်နေလား။
အမှု သေချာရင်တောင် ... တရားခံကို လက်ပူးလက်ကြပ် မိရင်တောင် ...... တရားစီရင်ခွင့် .... ခင်ဗျားတို့မှာ တပြားသားမှ မရှိဘူး။
ဒါတွေ အားလုံး အစိုးရရဲ့ တရားရေးလုပ်ငန်းကြီး တစ်ခုလုံးရဲ့ တာဝန်။
ေ-ာက်ပိုတွေ ပြော ...ေ-ာက်ပိုတွေ လုပ်ပြီး ... တိုင်းပြည် ဖျက်ဖို့ မစဉ်းစားနဲ့။
မုဒိမ်းမှု အပါအဝင် မည်သည့် ရာဇဝတ်မှုမျိုးကိုမှ "ဒေါသထွက်နေသော လူအုပ်ကြီး" က ကိုယ့်ဘာသာ တရားစီရင်ခွင့် မရှိပါ
အရေး မပါတာတွေ နဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘဝင်မြင့်ပြီး အကြမ်းဖက်၊ တိုက်ခိုက်၊ လူသတ် ... ခင်ဗျားတို့ လုပ်နေတာ ... တိုင်းပြည်ကို ဖျက်နေတာ သက်သက်ပဲ says:
တိုင်းပြည်မှာ မုဒိန်းမှုတွေ မဖြစ်စေချင်ရင် ...
ဖြစ်ပြီးတဲ့ မုဒိန်းမှုတွေကိုလည်း ထိထိရောက်ရောက် အပြစ်ပေးစေချင်ရင် ....
တရားဥပဒေကို စောင့်ရှောက်တဲ့ ... ရဲက စလို့ ...
တရားသူကြီး ... ထောင်ဝန်ထမ်းတွေ ...
ပြည်ထဲရေး ဌာနကြီး တစ်ခုလုံးအပြင် ....
တိုင်းပြည်ကို စီမံရတဲ့ အစိုးရ အဖွဲ့ နဲ့ သမ္မတအထိ ...
ေ-ာက်သုံးကျကျ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ် စီမံဖို့ ပြော ... ။
အရေး မပါတာတွေ နဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘဝင်မြင့်ပြီး .... အကြမ်းဖက်၊ တိုက်ခိုက်၊ လူသတ် ... ခင်ဗျားတို့ လုပ်နေတာ ... တိုင်းပြည်ကို ဖျက်နေတာ သက်သက်ပဲ။
ဒီအချိုးတွေနဲ့ တိုင်းပြည် မွဲဖို့ ... ပျက်ဖို့ပဲ ရှိတယ်။
လူလို နားလည်ကြပါ .. ။
အရေး မပါတာတွေ နဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘဝင်မြင့်ပြီး အကြမ်းဖက်၊ တိုက်ခိုက်၊ လူသတ် ... ခင်ဗျားတို့ လုပ်နေတာ ... တိုင်းပြည်ကို ဖျက်နေတာ သက်သက်ပဲ
"ပျော့ပျော့လေးနဲ့ နံတဲ့ ကြောင်ချီး" သမ္မတ က ဥပဒေမဲ့ အုပ်ချုပ်တဲ့ တိုင်းပြည်မှ မပျက်ရင် ပျက်စရာ တိုင်းပြည် ကျန်မယ် မထင်ဘူး says:
- "သမ္မတ" ဆိုတဲ့ လူက "ပျော့ပျော့လေးနဲ့ နံတဲ့ ကြောင်ချီး"။
- "အစိုးရအဖွဲ့" တစ်ဖွဲ့လုံးက "အကျင့်ပျက် အာဏာမက် ကိုယ်ကျိုးကြည့်ပြီး တိုင်းပြည်အတွက် လုပ်သင့်တာကို မလုပ်တဲ့ေ-ာက်သုံး မကျတဲ့ ကောင်တွေ"။
- "မြှောက်ပေးသူ" က သင်္ကန်းတကားကားနဲ့ "ဘာသာခြား မုန်းတီးရေးသမိုင်းနောက်ခံ ရှိတဲ့ ဘုန်းကြီး"။
- "မြှောက်ပေးတိုင်းေ-ွးတက်အောင် ကသူတွေ" က "ခပ်တုံးတုံး လူတစ်စု" ။
ဒီတိုင်းပြည်မှ ဒီလို မပျက်ရင် ... ပျက်စရာ တိုင်းပြည် ကျန်မယ် မထင်ဘူး။
"ပျော့ပျော့လေးနဲ့ နံတဲ့ ကြောင်ချီး" သမ္မတ က ဥပဒေမဲ့ အုပ်ချုပ်တဲ့ တိုင်းပြည်မှ မပျက်ရင် ပျက်စရာ တိုင်းပြည် ကျန်မယ် မထင်ဘူး
September 25, 2015 at 9:47 AM Reply
October 5, 2015 at 7:30 PM Reply
October 6, 2015 at 2:54 AM Reply
August 21, 2016 at 4:05 AM Reply
မန်မာပြည်မယ် အရေးတကြီး လိုအပ်နေတာက အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ မဟုတ်ပါ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပါ
ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်မယ် တရားဥပဒေကို အာဏာရှင်တွေ၊ အာဏာရှင်အောက်ဆွဲတွေက သူတို့လိုအပ်သလို ကိုယ်ကျိုးအတွက် အသုံးချခဲ့တယ်
လက်ရှိ အရေးတကြီး လိုအပ်နေတဲ့ အရာက တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပါ။
September 29, 2016 at 10:23 PM Reply
Yan Aung (ငရဲသား)
ဖွနေကျ ဖြစ်တဲ့ ဦးဝီရသူ က
Yan Aung (ငရဲသား) က ဦးဝီရသူကို
အခုလို ထောက်ပြပြီး တုန့်ပြန်ထားပါတယ်။